Boqolaal Maxaabiis kuna xiran Xabsiga Sacuudiga oo la sii dayn doono - Damqo
Dhaxal-sugaha Sacuudiga, Amiir Maxamed Bin Salmaan (MBS) ayaa amar ku bixiyey in la sii daayo 850 Maxaabiis ah oo u dhashay Hindi ah oo ku xiran Sacuudiga.
Ra’isul-wasaaraha dalka Hindiya, NARENDARA MOODI ayaa la sheegay inuu ka codsaday Dhaxal-sugaha Sacuudiga in la sii daayo Maxaabiistaasi, kadib, markii ay labada Hoggaamiye ku kulmeen Caasimadda dalkaasi ee Niyuu Delhi.
Tiro-koob bishii hore ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee dalka Hindiya waxaa lagu sheegyay in 2,224 Maxaabiis u dhalatay Hindiya ku xiran yihiin Xabsiyadda Sacuudiga, kuwaasi oo badankooda ku eedeysan dilal, afduub, Laaluush, Khamri iyo Daroogo .
Dhinaca kale, Dhaxal-sugaha Sacuudiga waxa uu Isniintii hore amar ku bixiyey in Xabsiga laga sii daayo 2,100 Maxbuus oo u dhalatay Pakistan, kadib, markii uu la kulmay Ra’isul-wasaaraha Pakistan, Imraan Khaan oo codsaday in la sii daayo Maxaabiistaasi.
Previous Sawirro:-Maxaa looga hadlay kulanka Golaha Wasiiradda cuusb Puntland?
Next Hadalka maanta ka soo yeeray dowlada Kenya oo ahaa mid ka soo baxay shirkii Golaha Wasiirada ee uu maanta shir-gudoomiyay Madaxweyne Uhuru Kenyatta yaa ahaa mid loogu digaayo dadka danaha ka leh dalka Kenya